More banyere Urdolls
Ndị ọkachamara na-azụ ahịa nwa bebi Urdolls
E guzobere Urdolls na 2013 ma anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke bebi. Yabụ anyị nwere ike nweta ezigbo njikwa yana njikwa nkọwa zuru ezu. A na-eji aka ya esepụta nwa bebi anyị ọ bụla nke nwere afọ iri atọ. N'ime usoro ahụ, anyị na-eji usoro nyocha sayensị dị elu na usoro zuru oke. Ihe omuma anyi bu imeputa ma meputa umuaka dolls kachasi nma. Weta ndị ahịa kachasị mma.
Anyị na-arụkọ ọrụ na ụdị ndị ama ama na ụlọ ọrụ ahụ, dịka: WM, Dollhouse 168 na wdg. Ọ na-e otu olu ghọtara site na ụlọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-ekewa ụmụ bebi mmekọahụ nke ụlọ ahịa urdolls n'ụzọ dị egwu na ụmụ bebi TPE dị ọnụ ala na ụmụ bebi silicone dị elu. Nwere ike ịchọta ụmụ nwanyị mara mma nke Europe, ụmụ nwanyị Asia dị nro, ụmụ bebi nwoke, ụmụ bebi anime na ụmụ bebi akụkọ ifo n'ụlọ ahịa anyị. N'ezie anyi anabatakwa umu bebi omenala. Naanị gwa anyị ozi mara mma gbasara nrọ gị. Anyị nwere ike imezu mkpa gị.
Smartgwa ụmụaka bebi okwu na ụmụ bebi silicone dị ọcha bụ ngwaahịa ndị ahịa anyị. Ha na-adọta uche nke ọtụtụ ndị ahịa ma na-ewetara ha ahụmịhe a na-enwetụbeghị ụdị ya. Nwee anụrị.